Bazi njani abaThengi bakho beB2B ngokuFunda ngomatshini Martech Zone
Iifemu ze-B2C zithathwa njengezona zibalekayo kumalinge okuhlaziya abathengi. Iindlela ezahlukeneyo ezinje nge-e-commerce, imithombo yeendaba kwezentengiso, kunye nentengiso yeselfowuni ziye zenza ukuba amashishini lawo enze ukuthengisa kunye nokunikezela ngeenkonzo ezigqwesileyo kubathengi. Ngokukodwa, idatha ebanzi kunye nohlalutyo oluphambili kusetyenziswa iinkqubo zokufunda ngomatshini zenze ukuba izicwangciso-qhinga ze-B2C zikubone ngcono indlela yokuziphatha kwabathengi kunye nemisebenzi yabo ngokusebenzisa iinkqubo ezikwi-Intanethi.
Ukufunda ngomatshini kukwabonelela ngesakhono esikhulayo sokufumana ukuqonda kubathengi beshishini. Nangona kunjalo, ukwamkelwa ziifemu ze-B2B kusafuneka kususwe. Ngaphandle kokukhula kokuthandwa kokufunda koomatshini, kusekho ukudideka okuninzi malunga nokuba ingena njani ngaphakathi kokuqonda okwangoku kwe- Inkonzo yabathengi ye-B2B. Ke masicacise loo nto namhlanje.
Ukufunda ngomatshini ukuqonda iipateni kwizenzo zabaThengi
Siyazi ukuba ukufunda ngomatshini ludidi nje lwee-algorithms ezenzelwe ukulinganisa ubukrelekrele bethu ngaphandle kwemiyalelo ecacileyo. Kwaye le ndlela ikufutshane nendlela esiziqonda ngayo iipateni kunye nokunxibelelana okusingqongileyo kwaye sifike ekuqondeni okuphezulu.
Imisebenzi yokuqonda yesiko le-B2B ijikeleze kwidatha encinci njengobungakanani benkampani, ingeniso, imali eyinkunzi okanye abasebenzi, kunye Uhlobo lomzi mveliso oluhlelwe ngeekhowudi ze-SIC. Kodwa, isixhobo esenziwe ngokufanelekileyo sokufunda ngomatshini sikunceda ngokwengxenye icandelo labathengi ngokusekwe kulwazi lwexesha lokwenyani.
Ichonga ukuqonda okufanelekileyo malunga neemfuno zabathengi, izimo zengqondo, ukhetho kunye nokuziphatha ngokubhekisele kwiimveliso okanye iinkonzo kunye nokusebenzisa oku kulungiselela ukuphucula intengiso kunye nezenzo zentengiso.
Ukufunda ngomatshini kwisaHlulo seDatha yaBathengi
Ngokusebenzisa ukufundwa komatshini kuyo yonke idatha yabathengi esiyiqokelelayo ngezenzo zabo kwiiwebhusayithi zethu, abathengisi banokulawula ngokukhawuleza kwaye baqonde umjikelo wobomi bomthengi, imakethi ngexesha lokwenyani, avelise iinkqubo zokunyaniseka, enze unxibelelwano olulungiselelwe umntu kunye nolufanelekileyo, afumane abathengi abatsha kunye gcina abathengi abalulekileyo ixesha elide.
Ukufunda ngomatshini kwenza ukuba ulwahlulo oluphambili lubalulekile kulwakhiwo lomntu ngamnye. Umzekelo, ukuba inkampani yakho ye-B2B ineenjongo ze ukucokisa amava abathengi kunye nokwandisa ukubaluleka konxibelelwano ngalunye, ulwahlulo oluchanekileyo lwedatha yomthengi lunokubamba isitshixo.
Nangona kunjalo, ukuze kwenzeke oku, kufuneka ugcine isiseko sedatha esinye, esicocekileyo esinokufundwa ngomatshini ngaphandle kwembambano. Ke, nje ukuba uneerekhodi ezinjalo ezicocekileyo, ungasebenzisa ukufunda ngomatshini ukwahlula abathengi ngokusekwe kwiimpawu ezinikezwe ngezantsi:
Iimfuno / iimpawu ezisekwe kwimveliso
Ukufunda ngomatshini ukuCebisa ubuChule ngokusekwe kwiitrends
Nje ukuba ukwahlula isiseko sedatha yabathengi, kuya kufuneka ubenakho ukugqiba ukuba wenze ntoni ngokusekwe kule datha. Nanku umzekelo:
Ukuba iwaka leminyaka e-US lityelele iivenkile ezithengisa ukutya kwi-intanethi, lithe tyibilili iphakheji ukujonga inani leswekile kwilebhile yesondlo, kwaye lihamba ngaphandle kokuthenga, ukufundwa komatshini kunokuyibona imeko enjalo kwaye kuchonge bonke abathengi abenze ezi zenzo. Abathengisi banokufunda kwezi datha zexesha lokwenyani kwaye benze ngokufanelekileyo.
Ukufunda ngomatshini ukuhambisa umxholo olungileyo kubaThengi
Kwangoko, ukuthengisa kubathengi be-B2B bekubandakanya ukuvelisa umxholo othimba ulwazi lwabo kwimisebenzi yokwazisa yexesha elizayo. Umzekelo, ukubuza isikhokelo ukuba ugcwalise ifom yokukhuphela incwadi ye-E ekhethekileyo okanye ucele nayiphi na idemo yemveliso.
Nangona umxholo onjalo ungabamba izikhokelo, uninzi lweendwendwe kwiwebhusayithi ziyathandabuza ukwabelana ngee-ID zazo ze-imeyile okanye iinombolo zefowuni ukujonga nje umxholo. Ngokwe- Iziphumo zophando lweNgcaciso, I-81% yabantu bayishiyile ifom ye-Intanethi ngelixa uyizalisa. Ke ayisiyondlela eqinisekisiweyo yokuvelisa isikhokelo.
Ukufunda ngomatshini kuvumela abathengisi be-B2B ukuba bafumane izikhokelo ezisemgangathweni ezivela kwiwebhusayithi ngaphandle kokufuna ukuba bagcwalise iifom zobhaliso. Umzekelo, inkampani ye-B2B inokusebenzisa ukufunda ngomatshini ukuhlalutya indlela yokuziphatha yabatyeleli kunye nokubonisa imixholo enomdla ngendlela eyenzelwe umntu ngexesha elifanelekileyo ngokuzenzekelayo.
Abathengi be-B2B basebenzisa umxholo hayi ngokusekwe kwiimfuno zokuthenga kuphela kodwa nakwinqanaba abakulo kuhambo lokuthenga. Yiyo loo nto ukubonisa umxholo kwiindawo ezithile zokunxibelelana nomthengi kunye nokuthelekisa iimfuno zabo ngexesha langempela kuya kukunceda ufumane elona nani liphezulu lezikhokelo ngexesha elifutshane.
UkuFunda koMatshini ukugxila kuZenzelo lwaBaxumi
Ukuzenzela inkonzo kubhekisa xa undwendwe / umthengi efumana inkxaso
Ngenxa yeso sizathu, imibutho emininzi iye yonyusa iminikelo yokuzixhasa ukuze inike amava abathengi angcono. Ukuzenzela inkonzo yimeko eqhelekileyo yokusebenzisa usetyenziso lokufunda ngomatshini. Iincoko, abancedisi ababonakalayo, kunye nezinye izixhobo eziphuculweyo ze-AI banokufunda kunye nokulinganisa unxibelelwano njengearhente yenkonzo yabathengi.
Izicelo zokuzenzela ngokwakho zifunde kumava adlulileyo kunye nokunxibelelana ukwenza imisebenzi enzima ngaphezulu kwexesha. Ezi zixhobo zinokuvela ekuqhubeni unxibelelwano olubalulekileyo kunye nabatyeleli bewebhusayithi ukukhulisa unxibelelwano lwabo, njengokufumanisa unxibelelwano phakathi komcimbi kunye nesisombululo.
Ngapha koko, ezinye izixhobo zisebenzisa ukufunda okunzulu ukuphucula ukuqhubeka, okukhokelela kuncedo oluchanekileyo ngakumbi kubasebenzisi.
Ayisiyiyo le kuphela, ukufunda ngomatshini kunezinye izicelo ezahlukeneyo. Kubathengisi, sisitshixo esifanelekileyo sokufunda amacandelo abathengi antsonkothileyo kwaye ayimfuneko, indlela abaziphatha ngayo kunye nendlela yokuzibandakanya nabathengi ngendlela efanelekileyo. Ngokukunceda uqonde imiba eyahlukeneyo yabathengi, itekhnoloji yokufunda ngomatshini ngokungathandabuzekiyo ingathatha inkampani yakho yeB2B iye kwimpumelelo engenakulinganiswa.
tags: b2bb2b inkonzo yabathengiisenzo somthengiUkuziphatha kwabathengiisiseko sedatha yabathengiIidemografi zabathengiumjikelo wobomi bomthengiixabiso lomthengiukufunda okunzuluyokufunda umatshinibonisa uphandoinkonzo yomntuiikhowudi ze-sicabancedisi ababonakalayo